नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कति घिन लाग्दो हो नेपाली राजनीति हेर्नुस् त !
कति घिन लाग्दो हो नेपाली राजनीति हेर्नुस् त !
हामीले नेपालमै बसेर मुलधारको पत्रकारिता गर्दा टेक नारायण भट्टराई पत्रकारितामा थिएनन । अहिले हामी बाहिर छौं तर यिनी भित्र छन र मन छुने पत्रकारिता गरिरहेका छन । यिनको पत्रकारिता स्टाइल हेर्दा मलाई आनन्द आउंछ । यस पटकको नेपाल बसाइका क्रममा टेक नारायण भाई सँग काठमाडौंमा भेट भयो, यिनले म सँग पनि अन्तर्वार्ता गरे त्यसपछि त मैले यिनलाई झनै चिन्ने मौका पाएँ । नयाँ पुस्ताका यि जजल्यमान ताराले यस्ता यस्ता सामाग्री पस्किन्छन जुन दमदार हुन्छन । भाईको यो प्रस्तुतिमा पनि दम छ । बुझ्ने लाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड । अघि बढीरहनुस् टेक नारायण भाई ! तपाईंको डेस्टिनेशन धेरै पर छ किनकी यि र यस्ता धेरै रिपोर्ट बाहिर ल्याउनुछ । दर्शक श्रोताहरु तपाईं पनि यो प्रस्तुती हेर्नुस् त ! - रामप्रसाद खनाल